सुन्दा अचम्म तर, सत्य : अमेरिकामा दुई आमाको कोखबाट एउटा बच्चा ! « Khasokhas KHASOKHAS ON GOOGLE NEWS CoronaVirus Fact Checking CoronaVirus News Update CoronaVirus: Stories of Hope CoronaVirus Resource Center File UI or PUA Claim Donate to Khasokhas KHASOKHAS E-MAGAZINE
दुई आमाको कोखबाट एउटा बच्चा ! सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । अमेरिकामा समलिंगी जोडीले बच्चा दुईवटा कोखमा पालैपालो राखेर जन्म दिएका छन् । पत्याउनु भएन, यो हेर्नुहोस् । अमेरिकामा समलिंगी जोडी अन्ततः दुईवटा कोखमा एउटै बच्चा पालैपालो राखेर जन्म दिने विश्वकै पहिलो जोडी बनेका छन् । बच्चा दुईजना आमाको गर्भमा हुर्किएको पहिलो बन्न सफल भएको छ ।
समलिंगी जोडीले आफ्नो पहिलो बच्चालाई जन्म दिनका लागि आइभिएफ प्रविधिको सहयोग लिएका थिए । ६ वर्षसम्म डेट गरेपश्चात् एश्ले र ब्लिस कल्टर नामका ती दुई समलिंगी महिलाले सन् २०१५ मा बिहे गरे ।